"Ford Mustang 1969" - omunye edume kakhulu American muscle cars
"Ford Mustang 1969" - inganeko kweqiniso American! It ngempela imoto yokuzinikela, okuqondene ekilasini Pony Car, okudaliwe ngesisekelo sedans injini umndeni Ford Falcon. Lo mshini linomlando othakazelisayo, izici ezinhle lobuchwepheshe, ukubukeka lubonakale. Nokho, kubalulekile ukuchaza kabanzi yokuthi lena imoto, kusukela isihloko ezithakazelisayo ngempela.
Ngaphambi sikhuluma imoto, "Ford Mustang ngo-1969," Ngingathanda ukuba sikhumbule amagama ambalwa mayelana onobuhle sokuqala ngqa. Nabo futhi, okufanele siqashelwe.
amandla Ekuqaleni efakwe ngaphansi motor hood aluboniswa e amahhashi. Khona-ke sibalo ecacisiwe ngaphandle okunamathiselwe. Kuphela 1972 inkampani ifikile ukuze abonise amandla kule "amahhashi" zendabuko. Ngandlela-thile, hola kule ndawo ngale sibalo sesinciphe kakhulu. Uma ekuqaleni kwaba 425 amahhashi, ke ngo-1972 lehla 350 amalitha. a. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi yemishini elakhiwa ngo sixties ngasekupheleni, lesi sibalo namanje umxhwele. Ngisho nanamuhla, amamodeli eziningi zanamuhla zezinkampani abakwazi ukuqhosha ezifana powertrains enamandla njengoba "Ford Mustang 1969".
Ngakho, into yokuqala ukukhuluma ingaphandle. Empeleni, kumelwe ngivume, izimoto 60s, 70s kanye 80s - uyinto ekhethekile. Manje, yebo, izimoto bheka imfashini kakhulu, stylish, kodwa onobuhle amadala iyohlale esiseHholo undab 'uzekwayo ngenxa design yabo engavamile kakade kanye nomklamo Retro. "Ford Mustang 1969" - imoto, isitayela esimiswe akhiwa ochwepheshe abaye anquma ukufunda okuthile kusukela okunethezeka Coupe 50s Continental Mark II. Hood eside, isiqu esifushane, plastic ohlangothini umzimba, lapho ikhefu ukuthi kungabonwa phezu ezingemuva isondo lwaleli. Ngaphezu kwalokho, ukubukeka kwaba ashukumisayo kakhulu futhi enamandla. Imigqa ehlanzekile, isayizi esincane, inani elimaphakathi chromium kule sekugcineni - konke lokhu kwenza imoto stylish kakhulu futhi, ngomqondo ongokomfanekiso, angaphansi kwe-European.
"Ford Mustang" 1969 inikezwa izinguqulo eziningana. Kwaba isabelomali ukuguqulwa E kanye Grande zikanokusho. Ngaphandle kwabo futhi wanikela izinguqulo ezimbili zemidlalo - Mach 1 futhi BOSS. By endleleni, lokhu imoto imodeli kuqala elalisetshenziswa isikimu chetyrehfarnaya ikhanda ukukhanya. yokukhanya Sheer ibekwe kokubili ngaphandle ngaphakathi Izinsimbi.
Amandla iyunithi Kumele kuqashelwe ukunakekelwa okukhethekile. Le modeli laqedwa injini V8 ukuthi ungaveza 375 amalitha. c.! Lokhu injini naye waba okhethekile qeda manifolds Ram Air lokungeniswa. Kwakuwusuku injini, eyenzelwe Nascar. 351-amahhashi injini efakwe ngaphansi hood ka Mach 1. Ngenxa yalesi iyunithi, ngasendleleni, kwakunokwenzeka ukuba oda cross-oluvala amasondo esinomkhawulo ukushelela umehluko oluvala amasondo labaqaphi elingemuva.
Inguqulo bathengisa kuphela emizimbeni Convertible kanye fastback, kuphelile nale powertrain njengoba 428 Cobra Jet. It ugesi ngezinye 335 amalitha. a.
"Ford Mustang Shelby 1969" - kuba imoto ngempela ukhululekile ukuthi kubukeka kahle hhayi ngabantu bangaphandle kuphela. ochwepheshe Iqembu bakholelwa ukuthi ingaphakathi imoto uyingxenye ebaluleke kakhulu-ke, futhi wazikhandla ukuze ukwenza kukhanga ngempela.
Okokuqala, adjustable ukukhwezwa ngaphakathi izihlalo ehlukile abagibeli futhi umshayeli. esitezi sesibili has a radio kanye isigwedlo ngawo isivinini sishintsha ngokushesha okukhulu. Kukhona futhi ilanga visors, console phansi nokuningi - inikwa amandla yi elawulwa kude esibukweni. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe baye banquma ukuhlomisa iwashi imoto futhi tachometer, okuyinto kuvikelwe ikholomu ayo.
Naphezu kweqiniso lokuthi imoto ngempela "omdala", uye, isimiso, konke kungase kudingeke futhi amakhasimende yesimanje. Ochwepheshe ukukhathazeka Ngisho nangalezo zinsuku wayazi ukuthi abantu badinga. Ngoba bakwenzela izimoto zabo ezikhethekile. Bona lami lalibonakala liqhakazile, ezahlukene, design sporty futhi ingaphakathi ezihlotshiswe kahle. Ngaphandle izimoto, "Ford" elihlangabezana nazo zonke izidingo zokuphepha. Kuyinto kulezi onobuhle ukukhathazeka ngowokuqala ukwethula trehtochnye amabhande.
Umshini kwadingeka ukumiswa kakhudlwana futhi kangcono. Ochwepheshe baye bazama ke futhi ushintshe izilungiselelo. Zathola nokuthi ngaphambili disc amabhuleki kanye ifakwe qeda ezimbili imodeli uhlelo. Ngenxa yalokho, it ephethwe ukufeza ngisho eziqondisa oluqonde kakhulu. "Mustang" - imoto onjiniyela bagxile induduzo, kalula yesondlo, kanye ukonga. Kumelwe uthi, benza ukufeza umgomo. Futhi ekugcineni, elinye iphuzu mayelana imoto "Ford Mustang 1969". Inani - lena futhi ehilelekile ezithakazelisayo. Naphezu kweqiniso lokuthi lo mshini uneminyaka engama, kubiza eqolo. Kuze kube manje, "Ford" 1969 kunzima ukuthola, kodwa ngempela. Futhi kungase kube kuwufanele ruble ayizigidi ezinhlanu, ezine, mhlawumbe ezintathu. Kuya ngokuthi kungaba eRussia muva amazwe (imvume izimoto ezindala elibiza nje amanani fabulous), iyini isimo, njalo njalo. D. Kodwa lemali Noma ngabe yikuphi kube kangangokuthi kube lula ungakwazi ukuthenga ezemidlalo imoto entsha evela Mercedes, isibonelo.
Indlela avuselele ibhethri semoto ekhaya?
Honda CR-V. Izibuyekezo
PPC Vaz-2114: Idivayisi, ukusebenza, ukugcinwa kanye ukukhanda
Ukubuyekeza: "Citroen C4" hatchback. Citroen C4: imininingwane, izithombe
Izici zobuchwepheshe "iVolga-Siberia" hhayi nje kuphela
Ukucaciswa "KIA Sid" (Kia Ceed). Wagon futhi hatchback, amanani kanye nemishini
Imigomo kanye nezinhloso zokuphathwa kwezimali
Analogs, ukubuyekezwa kanye nokusungulwa "Elevita"
"Olympian" - Park Hotel: incazelo, ukubuyekezwa, ikheli
Hazelnut: ikhalori kanye nezinzuzo
Le filimu "Captains Amabili": nabalingisi izindima
Uyazi yini wena empilweni kwaqala nini? Nakani izimpawu zokukhulelwa phambi ukubambezeleka.
Sheshisa ukufunda ekhaya. Kanjani ukufunda ukufunda ngejubane?
Ingubani - indoda enenhlanhla emhlabeni?
Horse Park "Rus" - indawo ukuvuselelwa Russian zokuzalanisa amahhashi nokuzijabulisa amasiko omndeni wonke
Indawo yokudlela "Isikebhe likaPetru": ulwazi oluyisisekelo, amamenyu kanye nokubuyekeza
Wax ngoba besokunxele: kanjani ukuyisebenzisa?
Uyithola kanjani ohlwini lwabalindele izindlu ngcono, sizoyaphi